MW CMC Oo Soo Kormeeray Xafiisyada Heer Deegaan - Cakaara News
MW CMC Oo Soo Kormeeray Xafiisyada Heer Deegaan
Jigjiga( Cakaaranews ) Jamce, 27ka may 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo uu weheliyo mw kuxigeenka ahna wasiirka xafiiska hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar iyo mas’uuliyiin kale ayaa saaka kormeer indho-indhayn ah kusoo maray qaar kamid ah xafiisyada heer deegaan iyo waliba dhismayaasha mashaariicaha kasocda xarunta deegaanka ee magaalada jiigjiga.
Hadaba ujeedada kormeerkan ayaa ahayd mid lagu indho-indhaynayay islamarkaana lagu fiirinayay nidaamyada adeeg-bixinta xafiisyada iyo qaab-shaqeedkooda iyadoo sidoo kalena lala-kulmayay macaamiisha xafiisyada iyo masuuliyiintaba.
Xiligii kormeerkan lagu jiray ayaa wuxuu madaxwaynuhu xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI kula-kulmay shir u socday hawl-wadeenada barnaamijka halbeega waxqabadka isu-dheelitiran(BSC) iyo agaasinada cududa shaqaalaha isagoo bogaadiyay geedi socodkii shirka kadibna fikiro muhiima oo la xidhiidha barnaamijka islamarkaana ay u riyaaqeen hawlwadeenadii shirka.
Sidoo kale madaxwaynaha iyo mas’uuliyiintii wehelinaysay ayaa soo kormeeray dhismaha garoonka wayn ee ciyaaraha kaladuwan oo gabagabo maraya iyo dhismayaal kale oo wali dhismahooda gacanta lagu hayo.
Kadibna waxaa kormeer lagu sii maray dugsiga Sare ee Sheekh Cabdisalaan iyadoo lagu aaday wakhti uu imtixaankii heer qaran ee fasalka 10, aadku kasocdo. Waxaana labooqday goobtii uu daadku kasaameeyay dugsiga oo ahayd gidaarka kore iyo qaabkuu usaameeyay si loo dhiso loogana gaadho xal waara oo aan soo noqod lahayn.